N-GUN JA WA: ငြိမ်းချမ်းရေး…. ဟိုး… အဝေးမှာ (၅)/ အောင်ဒင်
ငြိမ်းချမ်းရေး…. ဟိုး… အဝေးမှာ (၅)/ အောင်ဒင်
(ဒုတိယ) တိုင်းရင်းသားညီလာခံက ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ ” နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများတွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုများ အားလုံးသည် တစ်စုတစ်စည်းတည်း ကိုယ်စားပြုရပ်တည်ရန်၊ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီ သီးခြားရပ်တည်ဆွေးနွေးခြင်းမပြုရန်၊” ဆိုတဲ့အချက် တစ်ချက်ပါဝင်ပါတယ်၊ သဘာဝကျတဲ့ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ သဘောထားဖြစ်ပေမည့် လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ် မထင်ပါ၊
ဒီမှာ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီမှာ ကေအန်ယူရဲ့ ပါဝင်မှုကို မေးခွန်းထုတ်စရာရှိလာပါတယ်၊ တကယ်တော့ ကေအန်ယူ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်မူတူးအုပ်စုနဲ့ ဖဒိုဒေးဗစ်တာကဘောအုပ်စု ဆိုပြီး ဂိုဏ်းနှစ်ခုကွဲနေတာကြာပါပြီ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်က ဖဒိုဒေးဗစ်တာကဘော က ကေအန်ယူရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပြီး ကေအန်ယူကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီမှာ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ (၂) တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်၊ သူ ကေအန်ယူ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မူတူးနဲ့ အပေါင်းအပါများကို ဗဟိုကော်မီတီရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ မြန်မာစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလို့ဆိုပြီး အဖွဲ့က ထုတ်ပယ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်၊ နောက်တော့ အောက်ခြေတပ်များရဲ့ တောင်းဆိုမှုအရ ဗိုလ်ချုပ်မူတူးနဲ့ အဖွဲ့ကို ပြန်လည်လက်ခံခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမည့် နောက်ဆုံးကျင်းပတဲ့ ကေအန်ယူညီလာခံမှာ ဗိုလ်ချုပ်မူတူးအုပ်စုက အသာစီးရပြီး ဥက္ကဋ္ဌနေရာကို ဗိုလ်ချုပ်မူတူးက ရရှိသွားပြီး ဖဒိုဒေးဗစ်တာကဘော ကတော့ ဗဟိုကော်မီတီဝင် အဆင့်အထိ ထိုးကျသွားပါတယ်၊ တစ်ဘက်မှာတော့ သူက ဖက်ဒရယ်ကောင်စီရဲ့ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ (၂) တာဝန်ကို ဆက်ယူထားဆဲပါ၊ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များရဲ့ အထူးအရေးပေးခြင်းခံရတဲ့ ဥက္ကဋ္ဌသစ် ဗိုလ်ချုပ်မူတူးက သူမပါဝင်ပဲ ချမှတ်တဲ့ ဖဒရယ်ကောင်စီရဲ့ မူဝါဒအချို့ကို လက်မခံနိုင်တော့ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီမှာ ကေအန်ယူရဲ့ ကိုယ်စားပြုမှုဟာ မခိုင်မာတော့ပါ၊
အဲဒီနောက်မှာ ဒီအုပ်စုနှစ်ခုရဲ့ သဘောထားကွဲလွဲမှုက ပိုပြီးကြီးမားလာပါတော့တယ်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ် ဩဂုတ်လမှာ တိုင်းရင်းသားအလုပ်ကော်မီတီ (WGEC) ကိုအဓိကအထောက်အကူပြုနေတဲ့ ဥရောပ-မြန်မာဋ္ဌာန (Euro-Burma Office/EBO) က ဖြန့်ချိတဲ့ “ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) ၏မူဝါဒများကို ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း” (Analysis of The UNFC Position) ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာ လေးမျက်နှာပါစာတမ်းမှာ “ဖက်ဒရယ်ကောင်စီဟာ နိုင်ငံရေးအရဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အခြားနည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေပြင်ဆင်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပဲ အစိုးရရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲဆိုင်ရာ ကမ်းလှမ်းချက်တွေကို ညင်းပယ်နေတယ်”လို့ စွပ်စွဲဝေဘန်ပါတယ်၊ “ဖက်ဒရယ်ကောင်စီဟာ ပြည်တွင်းစစ်ကို ပြန်လည်တောက်လောင်စေတဲ့ အင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ ကစားပွဲကို ကစားနေတယ်”လို့လည်း ဝေဘန်ပါတယ်၊ အဲဒီစာတမ်းမှာပဲ “ဖက်ဒရယ်ကောင်စီထဲက ကေအန်ယူ ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ အမှန်တကယ် ကေအန်ယူကို ကိုယ်စားပြုခွင့်မရှိနိုင်ဘူး”လို့လဲ ထောက်ပြပါတယ်၊
Posted by Witmone at 7:31 AM
တူးပို့ တန်ခူး - နောင်ရိုး